राजधानीमा मोटरसाइकल क्रेज, ५ महिनामै झण्डै दोब्बर दर्ता, सडकलार्इ बर्डन कि बहार? :: BIZMANDU
राजधानीमा मोटरसाइकल क्रेज, ५ महिनामै झण्डै दोब्बर दर्ता, सडकलार्इ बर्डन कि बहार?
प्रकाशित मिति: Jan 2, 2017 2:54 PM
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो ५ महिनामा ५३ हजार मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कुल दर्ता संख्या ७३ हजारको ७३ प्रतिशत हो।
यदि यहि चापले मोटरसाइकल दर्ता हुने हो भने पोहोर साल वर्षभरिमा दर्ता भएका मोटरसाइकलको कोटा यस बर्ष ६ महिना भित्रै पूरा हुनेछ। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि अब राजधानीका सडकमा मोटरसाइकलको चाप कत्तिको बढ्नेछ।
मोटरसाइकल दर्ता बढेसंगै राजश्व संकलन पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको यातायात ब्यबस्था कार्यालय, बागमती मोटरसाइकल शाखाका प्रमुख रमेश दाहालले बताए। गत आर्थिक वर्षको कुल राजश्व एक अर्ब ४८ करोड संकलन भएको थियो। अहिले ५ महिनामै संकलन भएको यो रकम पोहोरको कुल राजस्वको ७३ प्रतिशत नै हो।
गत वर्ष नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण पनि आयातमा केही कमी भएको थियो मोटरसाइकल शाखा प्रमुख दाहालले भने, 'यो वर्ष आयात बढ्नुकासाथै मोटरसाइकल दर्ता तथा जाँच पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा पनि फेरबदल भएकोले राजश्व दोब्बर हुने अनुमान छ।'
गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा ६९ लटको ६९८५ नम्बर देखि दर्ता सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७७ लटको २६७ नम्बर सम्म दर्ता भएको थियो। एक लटमा ९९९९ मोटर साईकलको नम्बर हुन्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पुष १५ गते सम्म ७७ लटको २६८ नम्बर देखि ८२ लटको ३५ सय नम्बरसम्म दर्ता भैसकेका छन्।
राजधानीमा मोटरसाइकल क्रेज, ५ महिनामै झण्डै दोब्बर दर्ता, सडकलार्इ बर्डन कि बहार? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
शक्तिशाली व्यापारीको यो जहाज जुन तीन पटक दुर्घटना हुनबाट बच्यो, सामान्य जाँचमै उडान अनुमति
६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रभु टिभी सञ्चालनमा, एचडी च्यानलहरु पनि उपलब्ध
पूँजी वृद्धिपछि वित्तीय प्रणाली कति सवल? बैंक संख्या आधा घटाउनु पर्छ, शोभनदेव पन्तको विश्लेषण
मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकको संख्यानै तोकेर मर्जर नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार
एक क्लिकमा बैंकको निक्षेप र ऋणको विवरण, ब्याज तुलना गरेर प्रकृया अगाडि बढाउने नयाँ सेवा
बैंकहरु प्राइभेट कम्पनीजस्ता भए, फोर्सफुल मर्जरमा जानसक्नु पर्छ, भाष्करमणि ज्ञवालीको विश्लेषण
सरकारी 'ब्याकअप' मा बैंकर्स संघले फेरी गर्यो ब्याज बढ्न नदिने भद्र सहमति, बचत ७%, मुद्दति ११%